Aqoonsiga Xaqiiqada Eebbe I, Kaniisadda Adduunka Ee Switzerland Switzerland (WKG)
"Waayo, Erayga Ilaah wuu nool yahay, wuuna xoog badan yahay, wuuna ka af adag yahay seef kasta oo laba af leh, oo wuxuu dhex galaa ilaa ay kala tagto nafta iyo ruuxdu, iyo dhuuxa iyo lugta, oo waa xaakin fikirka iyo garaadka qalbiga" (Cibraaniyada 4,12). Ciise wuxuu yiri: "Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha" (Yooxanaa 14,6). Wuxuu kaloo yiri: "Laakiin kanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan adiga Ilaaha runta ah oo keliya iyo kan aad soo dirtay, Ciise Masiix." (Yooxanaa 17,3). Ogaanshaha iyo la kulanka Eebbe - taasi waa waxa nolosha ay ku saabsan tahay.
Eebbe wuxuu inoo abuuray inaan xiriir la lahaano. Nuxurka, udub dhexaadka nolosha weligeed ah, ayaa ah inaan "Ilaah garanno oo aan garanno Ciise Masiix" kii uu soo diray. Ogaanshaha Ilaahay kama imaanayso barnaamij ama hannaan, laakiin wuxuu ku dhexmaraa xiriir qof la yeesho.
Markii cilaaqaadka sii kordhayo, waxaan u nimid fahamka iyo waayo aragnimada dhabta ah ee Eebbe. Ma Ilaah Miyaa Uu Rumeeyaa adiga? Ma la kulantaa daqiiqad kasta maalin kasta?
Ciise wuxuu yidhi: "Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha" (Yooxanaa 14,6). Fadlan la soco in ciise uusan oran "waan ku tusi doonaa jidka" ama "waxaan ku siin doonaa khariidad waddo", laakiin taa bedelkeeda «Anigu waxaan ahay jidka" , Markii aan u nimaadno Ilaah doonista doonistiisa, su’aal intee la'eg ayaad u baahan tahay? Sayidow i tus waxa aan kaa rabo inaad sameyso? Goorma, sidee, halkee iyo yaan kula socdaa? I tus waxa dhici doona. Ama: Sayidow, hal tallaabo keliya ii sheeg markiiba, ka dibna waan fulin doonaa. Haddii aad raacdo Ciise maalinba maalinta ka dambaysa, ma saxnaan doontaa udub dhexaadka doonista Ilaah ee noloshaada? Haddii Ciise jidkayagu yahay, markaa uma baahnin tilmaamo kale ama khariidad waddo.
Ilaahay wuxuu kugu martiqaadayaa inaad kaqeybqaadato shaqadiisa isaga
"Haddii aad horreyso boqortooyadii Ilaah iyo xaqnimadiisa, waxaas oo dhan ayaa kuu dhici doona. Sidaa darteed ha ka welwelin berrito, maxaa yeelay berrito ayaa daryeeli doonta isaga. Waa ku filan tahay in maalin walbaa ay leedahay buuq u gaar ah " (Matayos 6,33: 34).
Ilaahay gabi ahaanba waa aamin
si aad u rabto inaad raacdo Ilaah maalin ka maalin kale
markaa waad raaci doontaa xitaa haddii aadan faahfaahin ka bixin
si aad ugu oggolaato inay jidkaaga ahaato
"Maxaa yeelay, waa Ilaah kan idinkaga dhex shaqeeya adiga oo doonaya oo dhammeeya, siduu isagu doonayo." (Filiboy 2,13). Xusuus-qoryada Baybalka ayaa muujinaya in Ilaah had iyo goor qaato talaabada marka uu dadka ku dhex daro shaqadiisa. Markaynu aragno Aabbuhu inagu dhex shaqeynayo, waa martiqaad aan ka helnay isaga inuu ku soo biiro shaqadan. Marka tan la eego, ma xasuusan kartaa wakhtiyo uu Ilaahay kugu martiqaaday inaad wax qabatid oo aadan ka jawaabin?
Ilaah had iyo goor wuu ka shaqeeyaa hareerahaaga
"Laakiin Ciise wuxuu ugu jawaabay: Aabbahay wuxuu shaqeeyaa ilaa maantadan la joogo, aniguna waan shaqeeyaa ... Markaas Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Wiilku waxba ma awoodo inuu iskiis u sameeyo, laakiin waxa keliya ee wuxuu arkaa aabihii oo samaynaya; maxaa yeelay waxaas ayaa sameeya, wiilkuna sidaas oo kale ayuu yeelaa. Maxaa yeelay, Aabbuhu wuu jecel yahay wiilka, oo wuxuu ku tusaa wuxuu isagu sameeyo oo dhan, oo weliba wuxuu ku tusi doonaa waxyaalo waaweyn oo dhan, si aad u la yaabtaan. (Yooxanaa 5,17: 19-20).
Waa tan tusaalaha loogu talagalay noloshaada shakhsi ahaaneed iyo kaniisadda. Waxa Ciise ka hadlayaa wuxuu ahaa xidhiidh jacayl kaas oo Ilaah ku gaadhay ujeedooyinkiisa. Ma aha inaan ogaano waxa loo sameeyo Ilaah, maxaa yeelay isagu had iyo goor waa ina hareerayaa. Waa inaan raacnaa tusaalaha Ciise oo aan eegno Ilaah waxa uu sameynayo daqiiqad kasta. Markaa waa masuuliyadeena inaan ku biiro shaqadeena.
Raadi meesha Ilaah ka shaqeyso kuna soo biir! Ilaah wuxuu leeyahay xiriir jacayl waara oo adiga kula jira oo dhab ah oo shaqsi ahaaneed: «Ciise wuxuu ugu jawaabay:" Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan, iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan ". Tani waa dalabkii ugu sareeyay uguna weyn " (Matayos 22,37: 38).
Ogaanshaha waxkasta oo noloshaada ah sida Masiixi ah, oo ay kujirto isaga inaad garato, la kulanto iyo garashada doonistiisa, waxay kuxirantahay tayada xiriirka aad jeceshahay ee aad la leedahay Ilaah. Waxaad ku sharxi kartaa xiriirka jaceylka ee aad la leedahay Ilaah adigoo si fudud u dhihi kara "Waan kugu jeclahay qalbigayga oo dhan"? Eebbe wuxuu inoo abuuray inaan xiriir jacayl la lahaano isaga. nidaam la'aan, xiriir jaceyl oo aad la yeelatid Ilaah waa mid aad uga muhiimsan waxyaabaha kale noloshaada!
Buugga aasaaska: «Khibrad Eebbe»
waxaa qoray Henry Blackaby